Steamcompmgr, StumpWM, Sugar, SwayWM နှင့် TWM: အခြားရွေးချယ်စရာ WMs ၅ ခု | Linux မှ
Steamcompmgr, StumpWM, Sugar, SwayWM နှင့် TWM: Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ WMs 5
ယနေ့ငါတို့နှင့်အတူဆက်လက် အ္ဌမ post ကို အကြောင်း Window မန်နေဂျာများ (Windows Managers - WM, English)၊ အောက်ပါတို့ကိုသုံးသပ်ပါမည် 5ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကနေ 50 ယခင်ကဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သောနည်းဖြင့်၎င်းတို့ကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောကဏ္aspectsများကိုဆက်လက်သိရန်ဖြစ်သည် တက်ကြွသောစီမံကိန်းများ, Que WM အမျိုးအစား သူတို့ဘာတွေလဲ သော့ချက် features တွေနှင့် သူတို့ဘယ်လို install နေကြတယ်အခြားသူများများထဲတွင်။
“ Distro GNU / Linux SteamOS တွင်ပုံမှန်အားဖြင့် login လုပ်ရန် Window Manager နှင့်ဖွဲ့စည်းမှု (Steam Machines / Steamboxes) အတွက်အထူးဖန်တီးထားသောဖွဲ့စည်းမှု။"။
မလှုပ်မရှားစီမံကိန်းဖြေ။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်ကျော်ကနောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် X server နှင့်ကျေနပ်လောက်ဖွယ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအပြင် Steam အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်။
ဂိမ်းလည်ပတ်နေစဉ်တစ်ချိန်တည်းမှာ Window Manager နဲ့ Composer အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျန်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ gnome-session နဲ့ gnome3 တို့နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကိုရရှိစေပါတယ်။
၎င်းသည်တတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရန်၊ Steam အက်ပလီကေးရှင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ဂိမ်းကိုယ်တိုင်၊ ရှေ့မျက်နှာနှင့်အလယ်ဗဟိုကိုတိုးချဲ့ရန်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုသာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ် SteamOS ပါ အတွင်း Sအသင်းစက်များ / Steamboxesအဆုံး၌အောင်မြင်သောစီးပွားဖြစ်ဘဝမရှိခဲ့ဘူးသော။ သို့သော်ပိုမိုသိရှိလိုပါက SteamOS ပါ သင်အောက်ပါကိုနှိပ်ပါ link ကို.
"ORn X11 ဝင်းဒိုးမန်နေဂျာ Tiling အမျိုးအစား။ ကီးဘုတ်မှစီမံပြီး Common Lisp ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားဖြင့်လုံးလုံးရေးသည်".
တက်ကြွသောစီမံကိန်းဖြေ။ ။ ပြီးခဲ့သည့်တစ်လလောက်ကမှနောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Iစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော်လည်းအနည်းဆုံးဖြစ်ရန်ကြိုးစားပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းတွင် ၀ င်းဒိုးတွင်အလှဆင်မှုများမရှိပါ၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်ချိတ်များနှင့်သင်လိုချင်သောအရာကိုပြုပြင်ရန်ပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများရှိသည်။
၎င်းသည်အချက်အလက်ထည့်သွင်းခြင်းအတွက်ကီးဘုတ်ပေါ်တွင်လုံးလုံးမှီခိုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ခလုပ်များ၊ အိုင်ကွန်များ၊ ခေါင်းစဉ်ဘားများ၊ ကိရိယာများသို့မဟုတ်အခြားသမားရိုးကျ GUI ဝစ်ဂျက်များမပါရှိပါ။
၎င်း၏ Lisp-based ဒီဇိုင်းသည် WM များ၏တိုးပွားလာသောထုတ်လုပ်မှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သောဒြပ်စင်များဖြစ်သည်။
ဤမွမ်းမံထားသော WM ကိုများသောအားဖြင့်မတူညီသော repositories များစွာတွင်တွေ့နိုင်သည် GNU / Linux Distros၏နာမအောက်မှာ အထုပ် "stumpwm"ထို့ကြောင့်၊ အသုံးပြုသော package manager၊ ဂရပ်ဖစ် (သို့) terminal ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဤ WM နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ပါတွင်တွေ့နိုင်သည် link ကို သို့မဟုတ်ဤအခြား link ကို.
“ ကလေးများအားအရည်အသွေးပြည့်ဝသောပညာရေးကိုရရှိရန်တူညီသောအခွင့်အရေးရရှိစေရန်စုစည်းထားသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကြိုးပမ်းမှုအောက်တွင်နာမည်တူသော Desktop Environment ၏အစိတ်အပိုင်း (အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု) သည် Window Manager ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုဘာသာစကား ၂၅ မျိုးကျော်ဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီး၊ ၄ င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများသည်နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်မှကလေးများကျောင်းများတွင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။".
တက်ကြွသောစီမံကိန်းဖြေ - ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကမှနောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကနည်းနည်းလျော့သွားတယ်။
စီမံကိန်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပညာရေးအတွက်ကွန်ပျူတာများကိုအသုံးပြုသောနည်းလမ်းကိုတီထွင်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းခြင်း၊ ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းတို့ကိုအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်မှတိုက်ရိုက်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့သင်ကြားရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခု။
၎င်းသည်ကလေးငယ်များနှင့်ဆရာများအားပေးသောဒီဇိုင်း (ဂရပ်ဖစ် / ပုံရိပ်) ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကြောင့်၎င်းသည် "လေ့လာမှုတွေးခေါ်ခြင်း" နှင့် "ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းအလေ့အကျင့်များ" ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ အစွမ်းထက်သင်ယူမှုလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကြောင်းအရာအဖြစ်။
ဝေမျှခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းတို့အတွက်သကြား၏ချဉ်းကပ်နည်းသည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ (FLOSS) ၏ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်အခြေခံသည်။.
၎င်းကို WM ထက် DE ဟုသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်း၏ဂရပ်ဖစ်မျက်နှာပြင်ကိုကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ "Desktop" အယူအဆအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်အဖြစ်ရှုမြင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဗဟုသုတအခြေပြုနှင့်လူမှုရေး - ကျောင်းသားများသည်စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းများပြုလုပ်ရမည်။
ဤမွမ်းမံထားသော WM ကိုများသောအားဖြင့်မတူညီသော repositories များစွာတွင်တွေ့နိုင်သည် GNU / Linux Distros၏နာမအောက်မှာ အထုပ် "python-sugar", "python-sugar3" နှင့် "sucrose"ထို့ကြောင့်၊ အသုံးပြုသော package manager၊ ဂရပ်ဖစ် (သို့) terminal ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဤ WM နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ပါလင့်ခ်များတွင်တွေ့နိုင်သည်။ link ကို 1, link ကို2y link ကို 3.
"ORn Wayland အတွက်ကောင်းမွန်သော Tiling အမျိုးအစားတေးရေးဆရာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ပြီး Window Manager နှင့် X3 အတွက် i11 Window Manager အတွက်ကောင်းမွန်သောနေရာတွင်အစားထိုးသည်။ ရှိပြီးသား i3 တည်ဆောက်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်ပြီး i3 အင်္ဂါရပ်အများစုကိုထောက်ပံ့သည်".
တက်ကြွသောစီမံကိန်းဖြေ - နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုကလွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လကျော်တုန်းကလောက်တွေ့ရှိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတည်ငြိမ်တဲ့ဗားရှင်းဟာ ၂ လနီးပါးရှိသေးတယ်။
Spatial မဟုတ်ဘဲ application windows များကိုစနစ်တကျစုစည်းခွင့်ပြုသည်။ ပြတင်းပေါက်များကိုသင်၏ဖန်သားပြင်၏ထိရောက်မှုကိုအမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ပေးသည့်ပုံမှန်ဂရစ်တစ်ခုဖြင့်စီစဉ်ထားပြီးကီးဘုတ်ဖြင့်သာလျင်မြန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
၎င်းသည် modular base ကိုထောက်ပံ့ရန် "wlroots" ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။
၎င်းသည် Nvidia ၏စီးပွားဖြစ်ဒရိုင်ဘာအပါအ ၀ င်စီးပွားဖြစ်ဂရပ်ဖစ်ယာဉ်မောင်းများကိုမထောက်ပံ့ပါ။ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် Nouveau ကားမောင်းသူအစားလိုအပ်ပါသည်။
၎င်းကိုကူးယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း (သို့) နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၊ link ကို။ နှင့်ဤသည်အခြား link ကို လိုအပ်ခဲ့လျှင်
"X Window System အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ window manager".
တက်ကြွသောစီမံကိန်းဖြေ။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ လကျော်ကလောက်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။
ခေါင်းစဉ်ဘားများ၊ ပုံသဏ္windowsာန်ပြတင်းပေါက်များ၊ အိုင်ကွန်စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံအမျိုးမျိုး၊ သုံးစွဲသူသတ်မှတ်ထားသော macro လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ခလုပ်နှိပ်ခြင်းနှင့်လက်နှိပ်ကီးဘုတ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း၊ သုံးစွဲသူသတ်မှတ်ထားသော key နှင့် pointer ခလုတ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
၎င်းသည် Xlib ကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားသောပရိုဂရမ်ငယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လိုအပ်သောစနစ်အရင်းအမြစ်များကို၎င်းကိုအလွန်ပေါ့ပါးစေသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရိုးလေးဖြစ်သော်လည်းအလွန်အမင်းပြင်ဆင်နိုင်သည်။ အက္ခရာများ၊ အရောင်များ၊ border width, title bar ခလုတ်များကိုအခြား element များအကြားအသုံးပြုသူမှစီစဉ်နိုင်သည်။
၎င်း၏ interface သည်မျက်မှောက်ခေတ်လူသိများသော WMs နှင့် DEs များနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။ များစွာသော၎င်းတို့သည် MacOS သို့မဟုတ် Windows ကဲ့သို့အလားတူအလုပ်လုပ်ကြသောကြောင့်သုံးစွဲသူအသစ်များသည်၎င်းတို့၏စာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ရှုခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုရန်ခက်ခဲလေ့ရှိသည်။ / သို့မဟုတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုပါ။
ဤမွမ်းမံထားသော WM ကိုများသောအားဖြင့်မတူညီသော repositories များစွာတွင်တွေ့နိုင်သည် GNU / Linux Distros၏နာမအောက်မှာ အထုပ် "twm"ထို့ကြောင့်၊ အသုံးပြုသော package manager၊ ဂရပ်ဖစ် (သို့) terminal ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဤ WM နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ပါတွင်တွေ့နိုင်သည် link ကို သို့မဟုတ်ဤအခြား link ကို.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" နောက်လာမယ့် ၅ ခု «Gestores de Ventanas»မဆိုလွတ်လပ်သော «Entorno de Escritorio»ခေါ် Steamcompmgr, StumpWM, သကြား၊ SwayWM နှင့် TWMတစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Steamcompmgr, StumpWM, Sugar, SwayWM နှင့် TWM: Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ WMs 5
Librewolf နှင့် Librefox - Waterfox ကျော်လွန်သော Firefox အတွက်အခြားနည်းလမ်းများ
Mastercard သည်ဗဟိုဘဏ်များအတွက် blockchain virtual ငွေကြေးစမ်းသပ်မှုပလက်ဖောင်းကိုစတင်ခဲ့သည်